Positive ဖြစ်ကြောင်းပြနေတဲ့ ကိုယ့်ဖာသာကိုယ်စစ်ဆေးတဲ့ Covid-19 antigen test kit ( January 13, 2022)
Omicron မျိုးကွဲသစ်နဲ့အတူ ကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်မှုတွေ တိုးလာနေတာကို ထိန်းချုပ်ဖို့ အမေရိကန် အစိုးရက ရောဂါပိုးရှိ၊ မရှိ အိမ်မှာကိုယ့်ဖာသာ စစ်ဆေးနိုင်မယ့် ပစ္စည်းတွေကို အခမဲ့မှာယူနိုင်တဲ့ အစီအစဉ်ကို အင်္ဂါနေ့မှာပဲ စတင်လိုက်ပါတယ်။ ကိုဗစ်ရောဂါ ကူးစက်ခံရတဲ့ အမေရိကန်ရောက် မြန်မာတွေကြားမှာလည်း ရောဂါပိုးရှိ၊ မရှိ Rapid Test အမြန် စစ်ဆေးတဲ့ နည်းနဲ့ရော မျိုးဗီဇအခြေခံ စစ်ဆေးတဲ့ PCR နည်းနဲ့ပါ စစ်ဆေးနေကြရပါတယ်။ အပြည့်အစုံကိုတော့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတဲ့ မအင်ကြင်းနိုင်က ပြောပြပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုမှာ ဒီတကြိမ် Omicron ပိုးကူးစက်မှုဟာ မူရင်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ကူးစက်မှုအခြေအနေထက် အဆမတန်မြန်ဆန် မြင့်မားကြောင်း အမေရိကန် ကျန်းမာရေးပညာရှင်တွေက ပြောပါတယ်။ အထူးသဖြင့် Omicron ပိုးကူးစက်မှုကြောင့် ကျောင်းတွေ၊ လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာ လူတွေမရှိသလောက်ဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေကို ရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ သီတင်းပတ်အတွင်းက ကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်ခံခဲ့ရတဲ့ မေရီလန်းပြည်နယ် စာရင်းကိုင် အရာရှိ မြန်မာနွယ်ဖွား Stephanie Shwe ကတော သူ့မန်နေဂျာနဲ့လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက်တွေ တချိန်တည်း ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရကြောင်းသိပြီးနောက် PCR နည်းနဲ့ စစ်ဆေးခဲ့တဲ့ အတွေ့အကြုံကို ဗွီအိုအေကို Zoom ကနေ အခုလို ပြောပြပါတယ်။
" ကျမ test လုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာက ကျမရဲ့ မန်နေဂျာက တခြားမန်နေဂျာတွေနဲ့ အစည်းအဝေးရှိတော့ သူသွားပြီး အစည်းအဝေးတက်တဲ့အချိန်မှာ သူ့ဘေးနားမှာထိုင်တဲ့ နောက်ရုံး တရုံးက မန်နေဂျာမှာ ကိုဗစ်ဖြစ်လာရော။ ဖြစ်လာပြီး တပတ်လောက်ကြာမှ ကျမ မန်နေဂျာကနေမကောင်း ဖြစ်တယ်။ နောက်ကျတော့ သူလည်း မသင်္ကာဖြစ်တာနဲ့ PCR test သွားလုပ်တယ်၊ အဖြေကိုစောင့်ကြည့်လိုက်တော့ Positive ဖြစ်ချိန်မှာ ကျမတို့ကို လှမ်းပြောတယ်။ ကျမလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ထင်တယ်။ အိမ်မှာ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရင်းနဲ့ chemical အနံ့တွေမရတော့ဘူး။ ဒါဆိုရင် ကိုဗစ်ပဲဆိုပြီး PCR test ကို ကောင်တီစင်တာမှာ သွားစစ်လိုက်တယ်။"
တဖက်မှာလည်း Omicron ပိုးကူးစက်မှု အမြင့်ဆုံးရောက်နေတဲ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ ရောဂါထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ အမေရိကန်အစိုးရက antigen နည်းကို အကြီးအကျယ်အားပေးရာမှာ မိသားစုလိုက် test kits တွေ အခမဲ့ပေးဝေးရေးအစီအစဉ်ကို မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်နေတာပါ။ antigen နည်းက ထွက်တဲ့ အဖြေက တိကျမှု ရှိမရှိဆိုတဲ့ အပိုင်းမှာတော့ ရောဂါလက္ခဏာပြနေရင် ဒီနည်းလမ်းနဲ့ အဖြေ အတိအကျသိရသလို၊ အရင်လို ရောဂါပိုးရှိမရှိ စစ်ဆေးတဲ့စင်တာတွေမှာ လူတွေ အရှည်ကြီး တန်းစီးစောင့်စရာမလိုတော့တဲ့အတွက် ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးမှာ အလွန်အထောက်ကူပြုကြောင်း နယူးရောက်မြို. Wyckoff Heights ဒုဆေးရုံအုပ် ကူးစက်ရောဂါ အထူးကု ဒေါက်တာဇေယျာသက် က စကိုက်ကနေ အခုလိုရှင်းပြပါတယ်။
"ဘာကြောင့် ဒါတွေကို အားပေးရသလဲဆိုရင် နံပါတ် (၁)က တကယ့်ကို peek ကူးစက်မှုနှုန်းအမြင့်ဆုံးဖြစ်နေချိန်မှာ တွေ့ကြမှာပါ။ လူတွေ လမ်းတွေပေါ်မှာ PCR test လုပ်ဖို့အတွက် အရှည်ကြီးတန်းစီးနေရတယ်။ ရာသီဥတု အနုတ်လက္ခဏာအောက်ရောက် အေးခဲနေပေမယ့် လူတွေ တန်းစီစောင့်ကြည့်ရတယ်။ မနက်အစောကြီးကတည်းက လာကြရတယ်။ ဆိုတော့ ကိုယ့်အိမ်မှာ ကိုယ် test လုပ်လို့ရလို့ positive ဖြစ်တယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ဘာကိုယ် ကွာရင်းတင်းလုပ်လို့ရတယ်။ အိမ်မှာပဲနေပါ။ အလုပ်မသွားပါနဲ့။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ Omicron ပဲဖြစ်ဖြစ် Delta ပဲဖြစ်ဖြစ် နှစ်ခုစလုံးက အရမ်းကို ပွားတယ်။ ရုံးထဲမှာ တယောက်ဖြစ်လိုက်လို့ရှိရင် အခန်းထဲမှာ ရှစ်ယောက်ရှိတယ်ဆိုရင် အကုန်လုံးကူးမှာပဲ။ ဒါရှင်းရှင်းလေးပဲ။ တကယ့်ကို မြန်တာ။ အမတို့ အလုပ်တွေမှာလည်း တကယ့်ကို ဒုက္ခရောက်သလို၊ ကျန်တဲ့ စက်ရုံအလုပ်ရုံတွေမှာ အကုန်လုံးပဲ။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ လူ ၈ ယောက်ရှိတဲ့အလုပ်မှာ ၇ ယောက် ပျောက်သွားလို့ရှိရင် တယောက်တည်းက လူ ၇ ယောက်စာအလုပ်ကို လုပ်ရမှာပေါ့။ ထိုနည်းတူစွာပဲ ကျနော်တို့ ဆေးရုံတွေမှာလည်း အရမ်းဒုက္ခရောက်တယ်။ သူနာပြုဆရာမတွေ၊ ဆရာဝန်တွေ ပျောက်သွားတယ်၊ ဆေးရုံဝန်ထမ်းတွေ ပျောက်သွားတယ်။ အရမ်းဒုက္ခရောက်တယ်။"
antigen နည်းနဲ့ စစ်ရာမှာ positive ပြပေနေပေမဲ့ PCR နည်း နဲ့ စစ်တဲ့အခါမှာ negative ပြနေတာတွေရှိသလို၊ ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရပြီးသူမှာ ရောဂါလက္ခဏာမပြတော့ပေမဲ့ PCR ရလာဒ်မှာ positive ဆိုပြီး တောက်လျှောက်ပြတာမျိုးလည်းရှိနေကြောင်း သူကပြောပါတယ်။
"antigen test ရဲ့ အကောင်းဆုံးနည်းက ဘာလည်းဆိုရင် ရောဂါလက္ခဏာပြတဲ့အချိန်ကျရင် antigen test ကနေ positive ပြတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ CDC က အခုချိန်မှာ ဥရောပက ပြန်လာတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ တခြားနိုင်ငံကို သွားရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ၂၄ နာရီအတွင်းမှာ antigen ရော PCR ရော စစ်လို့ရတယ်လို့ ပြောတယ်။ antigen test ကနေ positive ဖြစ်ပြီးဆိုရင် အဲဒီသူက positive ဖြစ်ပြီးပဲ။ ရောဂါလက္ခဏာ ရှိသည်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မရှိသည်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။ ဒါပေမယ့် အဲဒီအချိန်မှာ PCR သွားစစ်မယ်ဆိုရင်သူက negative ပြနိုင်တယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုရင် PCR က ရောဂါပိုး လူ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲဝင်ပြီး နှစ်ရက်လောက်ကြာမှ positive ဖြစ်တယ်။ ပြဿနာရှိတဲ့အချက်ကလည်း PCR က ရက်တွေ၊ သီတင်းပတ်တွေကနေ လ ပိုင်းအထိ သူက positive ပြနိုင်တယ်။ သဘောတခုက နှာခေါင်းထဲ တချိန်လုံးနှိုက်ပြီး စစ်နေမယ်ဆိုရင် တချိန်လုံး positive ဖြစ်နေတယ်။ လူတယောက်က တကယ်တမ်းတော့ ကောင်းသွားနေပြီပဲ။ ဖျားလည်း မဖျားတော့ဘူး။ နှာလည်း မစည်းတော့ဘူး။ ချောင်းလည်း မဆိုးတော့ဘူး။ အလုပ်ပြန်ဝင်ခါနီးပြီဆိုရင် အဲဒီမှာ တော်တော်စကားပြောပြီ။ ဒီတခေါက်ဖြစ်တဲ့ အဆိုးဆုံးအခြေအနေက အလုပ်သမားတွေ အများကြီး ပျောက်ထွက်သွားတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ကျနော်တို့က antigen test နဲ့ ပြန်စစ်ခိုင်းတာပေါ့။"
Omicron ပိုးကူးစက်မှုဒဏ်ကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ ဒီဇင်ဘာ တတိယပတ်ကနေ ဇန်နဝါရီလ ဒုတိယပတ်အထိ အဆိုးဆုံးရင်ဆိုင်ခဲ့ရကြောင်းလည်း ဒေါက်တာဇေယျာသက်က ဗွီအိုအေကိုပြေပါတယ်။
အမရေိကနျမှာ ကိုဗဈရောဂါပိုး စဈဆေးမှုတှေ အရှိနျမွှငျ့
Omicron မြိုးကှဲသဈနဲ့အတူ ကိုဗဈရောဂါကူးစကျမှုတှေ တိုးလာနတောကို ထိနျးခြုပျဖို့ အမရေိကနျ အစိုးရက ရောဂါပိုးရှိ၊ မရှိ အိမျမှာကိုယျ့ဖာသာ စဈဆေးနိုငျမယျ့ ပစ်စညျးတှကေို အခမဲ့မှာယူနိုငျတဲ့ အစီအစဉျကို အင်ျဂါနမှေ့ာပဲ စတငျလိုကျပါတယျ။ ကိုဗဈရောဂါ ကူးစကျခံရတဲ့ အမရေိကနျရောကျ မွနျမာတှကွေားမှာလညျး ရောဂါပိုးရှိ၊ မရှိ Rapid Test အမွနျ စဈဆေးတဲ့ နညျးနဲ့ရော မြိုးဗီဇအခွခေံ စဈဆေးတဲ့ PCR နညျးနဲ့ပါ စဈဆေးနကွေရပါတယျ။ အပွညျ့အစုံကိုတော့ ဆကျသှယျမေးမွနျးထားတဲ့ မအငျကွငျးနိုငျက ပွောပွပေးမှာ ဖွဈပါတယျ။
အမရေိကနျ ပွညျထောငျစုမှာ ဒီတကွိမျ Omicron ပိုးကူးစကျမှုဟာ မူရငျး ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈပိုး ကူးစကျမှုအခွအေနထေကျ အဆမတနျမွနျဆနျ မွငျ့မားကွောငျး အမရေိကနျ ကနျြးမာရေးပညာရှငျတှကေ ပွောပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ Omicron ပိုးကူးစကျမှုကွောငျ့ ကြောငျးတှေ၊ လုပျငနျးခှငျတှမှော လူတှမေရှိသလောကျဖွဈနတေဲ့ အခွအေနကေို ရငျဆိုငျနကွေရပါတယျ။
ပွီးခဲ့တဲ့ သီတငျးပတျအတှငျးက ကိုဗဈရောဂါကူးစကျခံခဲ့ရတဲ့ မရေီလနျးပွညျနယျ စာရငျးကိုငျ အရာရှိ မွနျမာနှယျဖှား Stephanie Shwe ကတော သူ့မနျနဂြောနဲ့လုပျဖျေါကိုငျဖကျတှေ တခြိနျတညျး ရောဂါပိုးကူးစကျခံရကွောငျးသိပွီးနောကျ PCR နညျးနဲ့ စဈဆေးခဲ့တဲ့ အတှအေ့ကွုံကို ဗှီအိုအကေို Zoom ကနေ အခုလို ပွောပွပါတယျ။
" ကမြ test လုပျဖွဈတယျဆိုတာက ကမြရဲ့ မနျနဂြောက တခွားမနျနဂြောတှနေဲ့ အစညျးအဝေးရှိတော့ သူသှားပွီး အစညျးအဝေးတကျတဲ့အခြိနျမှာ သူ့ဘေးနားမှာထိုငျတဲ့ နောကျရုံး တရုံးက မနျနဂြောမှာ ကိုဗဈဖွဈလာရော။ ဖွဈလာပွီး တပတျလောကျကွာမှ ကမြ မနျနဂြောကနမေကောငျး ဖွဈတယျ။ နောကျကတြော့ သူလညျး မသင်ျကာဖွဈတာနဲ့ PCR test သှားလုပျတယျ၊ အဖွကေိုစောငျ့ကွညျ့လိုကျတော့ Positive ဖွဈခြိနျမှာ ကမြတို့ကို လှမျးပွောတယျ။ ကမြလညျး ဖွဈနိုငျတယျလို့ထငျတယျ။ အိမျမှာ သနျ့ရှငျးရေးလုပျရငျးနဲ့ chemical အနံ့တှမေရတော့ဘူး။ ဒါဆိုရငျ ကိုဗဈပဲဆိုပွီး PCR test ကို ကောငျတီစငျတာမှာ သှားစဈလိုကျတယျ။"
တဖကျမှာလညျး Omicron ပိုးကူးစကျမှု အမွငျ့ဆုံးရောကျနတေဲ့ အမရေိကနျပွညျထောငျစုမှာ ရောဂါထိနျးခြုပျနိုငျဖို့ အမရေိကနျအစိုးရက antigen နညျးကို အကွီးအကယျြအားပေးရာမှာ မိသားစုလိုကျ test kits တှေ အခမဲ့ပေးဝေးရေးအစီအစဉျကို မွှငျ့တငျဆောငျရှကျနတောပါ။ antigen နညျးက ထှကျတဲ့ အဖွကေ တိကမြှု ရှိမရှိဆိုတဲ့ အပိုငျးမှာတော့ ရောဂါလက်ခဏာပွနရေငျ ဒီနညျးလမျးနဲ့ အဖွေ အတိအကသြိရသလို၊ အရငျလို ရောဂါပိုးရှိမရှိ စဈဆေးတဲ့စငျတာတှမှော လူတှေ အရှညျကွီး တနျးစီးစောငျ့စရာမလိုတော့တဲ့အတှကျ ရောဂါထိနျးခြုပျရေးမှာ အလှနျအထောကျကူပွုကွောငျး နယူးရောကျမွို. Wyckoff Heights ဒုဆေးရုံအုပျ ကူးစကျရောဂါ အထူးကု ဒေါကျတာဇယြောသကျ က စကိုကျကနေ အခုလိုရှငျးပွပါတယျ။
"ဘာကွောငျ့ ဒါတှကေို အားပေးရသလဲဆိုရငျ နံပါတျ (၁)က တကယျ့ကို peek ကူးစကျမှုနှုနျးအမွငျ့ဆုံးဖွဈနခြေိနျမှာ တှကွေ့မှာပါ။ လူတှေ လမျးတှပေျေါမှာ PCR test လုပျဖို့အတှကျ အရှညျကွီးတနျးစီးနရေတယျ။ ရာသီဥတု အနုတျလက်ခဏာအောကျရောကျ အေးခဲနပေမေယျ့ လူတှေ တနျးစီစောငျ့ကွညျ့ရတယျ။ မနကျအစောကွီးကတညျးက လာကွရတယျ။ ဆိုတော့ ကိုယျ့အိမျမှာ ကိုယျ test လုပျလို့ရလို့ positive ဖွဈတယျဆိုရငျ ကိုယျ့ဘာကိုယျ ကှာရငျးတငျးလုပျလို့ရတယျ။ အိမျမှာပဲနပေါ။ အလုပျမသှားပါနဲ့။ ဘာဖွဈလို့လညျးဆိုတော့ Omicron ပဲဖွဈဖွဈ Delta ပဲဖွဈဖွဈ နှဈခုစလုံးက အရမျးကို ပှားတယျ။ ရုံးထဲမှာ တယောကျဖွဈလိုကျလို့ရှိရငျ အခနျးထဲမှာ ရှဈယောကျရှိတယျဆိုရငျ အကုနျလုံးကူးမှာပဲ။ ဒါရှငျးရှငျးလေးပဲ။ တကယျ့ကို မွနျတာ။ အမတို့ အလုပျတှမှောလညျး တကယျ့ကို ဒုက်ခရောကျသလို၊ ကနျြတဲ့ စကျရုံအလုပျရုံတှမှော အကုနျလုံးပဲ။ ဘာလို့လညျးဆိုတော့ လူ ၈ ယောကျရှိတဲ့အလုပျမှာ ၇ ယောကျ ပြောကျသှားလို့ရှိရငျ တယောကျတညျးက လူ ၇ ယောကျစာအလုပျကို လုပျရမှာပေါ့။ ထိုနညျးတူစှာပဲ ကနြျောတို့ ဆေးရုံတှမှောလညျး အရမျးဒုက်ခရောကျတယျ။ သူနာပွုဆရာမတှေ၊ ဆရာဝနျတှေ ပြောကျသှားတယျ၊ ဆေးရုံဝနျထမျးတှေ ပြောကျသှားတယျ။ အရမျးဒုက်ခရောကျတယျ။"
antigen နညျးနဲ့ စဈရာမှာ positive ပွပနေပေမေဲ့ PCR နညျး နဲ့ စဈတဲ့အခါမှာ negative ပွနတောတှရှေိသလို၊ ရောဂါပိုးကူးစကျခံရပွီးသူမှာ ရောဂါလက်ခဏာမပွတော့ပမေဲ့ PCR ရလာဒျမှာ positive ဆိုပွီး တောကျလြှောကျပွတာမြိုးလညျးရှိနကွေောငျး သူကပွောပါတယျ။
"antigen test ရဲ့ အကောငျးဆုံးနညျးက ဘာလညျးဆိုရငျ ရောဂါလက်ခဏာပွတဲ့အခြိနျကရြငျ antigen test ကနေ positive ပွတယျ။ ဒါကွောငျ့မို့လို့ CDC က အခုခြိနျမှာ ဥရောပက ပွနျလာတာပဲဖွဈဖွဈ၊ တခွားနိုငျငံကို သှားရငျပဲဖွဈဖွဈ ၂၄ နာရီအတှငျးမှာ antigen ရော PCR ရော စဈလို့ရတယျလို့ ပွောတယျ။ antigen test ကနေ positive ဖွဈပွီးဆိုရငျ အဲဒီသူက positive ဖွဈပွီးပဲ။ ရောဂါလက်ခဏာ ရှိသညျပဲဖွဈဖွဈ၊ မရှိသညျပဲဖွဈဖွဈပေါ့။ ဒါပမေယျ့ အဲဒီအခြိနျမှာ PCR သှားစဈမယျဆိုရငျသူက negative ပွနိုငျတယျ။ ဘာကွောငျ့လညျးဆိုရငျ PCR က ရောဂါပိုး လူ့ခန်ဓာကိုယျထဲဝငျပွီး နှဈရကျလောကျကွာမှ positive ဖွဈတယျ။ ပွဿနာရှိတဲ့အခကျြကလညျး PCR က ရကျတှေ၊ သီတငျးပတျတှကေနေ လ ပိုငျးအထိ သူက positive ပွနိုငျတယျ။ သဘောတခုက နှာခေါငျးထဲ တခြိနျလုံးနှိုကျပွီး စဈနမေယျဆိုရငျ တခြိနျလုံး positive ဖွဈနတေယျ။ လူတယောကျက တကယျတမျးတော့ ကောငျးသှားနပွေီပဲ။ ဖြားလညျး မဖြားတော့ဘူး။ နှာလညျး မစညျးတော့ဘူး။ ခြောငျးလညျး မဆိုးတော့ဘူး။ အလုပျပွနျဝငျခါနီးပွီဆိုရငျ အဲဒီမှာ တျောတျောစကားပွောပွီ။ ဒီတခေါကျဖွဈတဲ့ အဆိုးဆုံးအခွအေနကေ အလုပျသမားတှေ အမြားကွီး ပြောကျထှကျသှားတယျ။ ဒါကွောငျ့မို့လို့ ကနြျောတို့က antigen test နဲ့ ပွနျစဈခိုငျးတာပေါ့။"
Omicron ပိုးကူးစကျမှုဒဏျကို အမရေိကနျပွညျထောငျစုမှာ ဒီဇငျဘာ တတိယပတျကနေ ဇနျနဝါရီလ ဒုတိယပတျအထိ အဆိုးဆုံးရငျဆိုငျခဲ့ရကွောငျးလညျး ဒေါကျတာဇယြောသကျက ဗှီအိုအကေိုပွပေါတယျ။